Daryeelka Caafimaad ee Kaankarada Naasaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Daryeelka Caafimaad ee Kaankarada Naasaha
La daabacay måndag 17 oktober 2011 kl 10.01
Baaritaan uu sameeyay ururka miisaaniyadda gaarka ah ee cudurka kaankarada (Cancerfonden) ayaa lagu ogaaday inay sida caadiga ah qaadato muddo laba toddobaad ah u dhaxeeyso kolka haween lagu ogaado inay qabto cudurka kaankarada ee naasaha illaa inta looga yeerayo daryeel caafimaad. Waana mid ey ka siman yihiin barkood hayad-goboleedyada daryeelka caafimaad ee dalka.
Daryeel degdeg ah
Ururka miisaaniyadda gaarka ee kaankarada iyo culimmo ku takahsustay cudurka kaankarada ayaa maqaal ey si wada-jir ah ugu soo daabaceen maanta war-geeyska maalinlaha ee DN ku sheegay in loo baahan yahay sidii loo dhimi lahaa muddada, maadaama suurtagalku ka sii yaraanayo in cudurka laga kaco haddii wakhtigu sii dheeraado.
Gobollada qaarkood ayaa muddada la sugo daryeel caafimaad ee cudurka kaankaradu tahay muddo dheer ee aan la aqbali karin, sida ururku sheegay.
Badankood gobollada 12 ka mid ah 21-ka ee dalku ka kooban yahay ayey qaadataa muddo laba toddobaad ka badan kolka cudurka la ogaado iyo kolka daweeyntiisa la bilaabo.
Lix gobol ayaa sheegey inay muddadaasi qaadato inta u dhaxeeysa afar illaa shan toddobaad, waana gobollada Dalarna, Gävleborg, Kalmar, Västernorrland, Västerbotten iyo qeyb ka mid ah gobolka Västra Götaland (Koonfurta Älvsborg iyo Stenungsund).
Hayadda baaritaankan sameeysay (Cancerfonden) ayaa soo jeedisay afar shuruudood sidii loo dhimi lahaa muddadaa loona gaarsiin lahaa laba toddobaad: In gobolladu tooshka ku ifiyaan iyaga oo la kaashanaya xarummaha ururrada kaankarada ee carrigooda sidii sharraxaad loogu heli lahaa amuurtaa. Kadib iney soo ban-dhigaan tallaabooyinka ey ka qaadeen si muddadaa loo dhimo loona gaarsiiyo laba toddobaad. Dhammaan urur-goboleedyada kaankarada ayaa u magacaabi doona wakiil la socda hoowlaha lagu hagaajinayo sidii wax looga qaban lahaa kaankarada naasaha haweenka Iyo sidoo kale in lagu kordhiyo dhaba-tuska Hayadda Bulshada (Socialstyrelsen) goolkeeda la xiriira wakhtiga la sugo daweeynta.